Howlaha gar-gaarka Soomaaliya oo awood loo siinayo Hay’adaha Maxaliga ah | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Howlaha gar-gaarka Soomaaliya oo awood loo siinayo Hay’adaha Maxaliga ah
Howlaha gar-gaarka Soomaaliya oo awood loo siinayo Hay’adaha Maxaliga ah
Muqdisho(SNTV) Shirkan oo ay isugu yimaadeen mas’uuliyiinta qaar kamid ah wasaaradaha heer Federaal iyo heer dowlad goboleed,hay”do caalami ah iyo kuwo Maxali ah ayaa diiradda lagu saaray sidii hoos loogu daadejin lahaa howlaha gargaarka bani’aadinimo ee Soomaaliya iyo awood siinta hay’adaha maxaliga ah ee dalka ka howlgala.
Intii uu socday shirkaasi ayaa lagu soo bandhigay aragtiyo ku aadan sida ugu haboon oo gar gaar dhameystiran loo gaarsiin karo dadka kunool guud ahaan dalka,iyadoo loo marayo awoodsiinta hay’adaha maxaliga ah,kuwaasi oo la aaminsanyahay in ay kaga haboon yihiin fidinta howlaha gargaar maadaama ay dalka ay ka howlgalaan.
Xoghayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ayaa faah faahiyay ahmiyada ay dalka u leedahay qorshaha daadejinta howlaha samafal.
“Runtii waxaa ahmiyad weyn inoo ah in fulinta mshaariicda ay gacanta u galaan hay’adaha maxaliga ah ee dalk aka howlgala,waxaana raacaynaa heshiis horey u dhacay iyo wada hadaladii dalka Turkiga 2012kii kaasi oo ku saabsanaa in dadka maxaliga ah awood badan la siiy,taasina waa inoo faaido”. Ayuu Yiri Maxamed Macalin.
Sidoo kale Maxamuud Maxamed Ibraahim oo kamid ah mas’uuliyiinta Hay’adda World Vision oo kamid ah hay’adaha gar gaarka ee Caalamiga ah aya hadlay ujeedka laga damacsanyahay in awood la siiyo hay’adaha maxaliga ah.
“Anaga ka caalami ahan iyo kuwa maxaliga ah waxaan is leeyahay waxbadan ayay qabanaysaa arrintan,waxaa ay wax ka taraysaa in ay gaaraan meel aysan gaari Karin kuwa caalamiga ah,iyagana waxay u noqonaysaa dabcan fursada awoodooda ay sare ugu qaadi karaan”. Ayuu yiri Maxamuud.
Talaabadan ayaa hadii ay hirgasho waxay fursad u noqonaysaa dadbadan oo haysta xaalado bani’aadanimo in ay si haboon uga faa’idaystaan howlaha gargaar ee dalka ka socda,waxaana ay imanaysaa iyadoo baahiyo badan loo qabo in dadka ku dhibaataysan qeybo kamid ah gobolada dalka ay helaan fursad ku aadan adeegyada ay u baahanyihiin.
Previous articleGuddoomiyaha Baarlamaanka JFS oo sheegay in uu xirmay Kalfadhigiii Seddexaad ee Golaha Shacabka
Next articleMareykanka iyo Kenya oo ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin xasilinta Soomaaliya